Wararka Maanta: Jimco, May 10, 2013-Ururka SECO Gobolka Awdal ka Sameeyay Wacyi-gelin ku saabsan Khatarta uu leeyahay Tahriibka (DAAWO SAWIRRO)
Ururkan ayaa wuxuu horay u sameeyay waxyaabo uu ku horumarinayo deegaanka iyo bulshada, kuwaasoo ay ka mid yihiin: Dhir lagu beeray Jaamacadda Camuud, Wacyigalinno laga sameeyay dugsiyada Awdal iyo Salal oo ku saabsanayd: khatarta xanuunka dilaaga ah ee HIV/AIDS, khatarta tahriibta iyo dhibkeeda iyo wax-qabadyo badan.
Malimihii u dambeeyay ayaa ururka SECO wuxuu wacyi-gelin ka waday inta badan dugsiyada sare ee magaalada Boorame taasoo shalay lasoo afjaray. waxaana lagu soo gabgabeeyay dugsiyada: Ubaya Ibnu Kacab iyo Ardaale.
Ugu horreyn waxaa dugsiyadaas hadal ka jeediyay guddoomiyaha SECO, Axmed Xuseen Daahir (Caano-nuug) oo sheegay in ururkooda uu saddex sano shaqeynayo, sababta ay u aasaaseenna ay tahay: horumarinnta iyo dhiiri-galinta waxbarashada, kor u qaadidda waxbarashada haweenka iyo caruurta, horumarinta deegaanka iyo bulshada, bulshada oo lagu dhiirri-geliyo ilaalinta nadaafada, ka-hortagga xaalufinta dhirta, ilaalinta xuquuqda haweenka iyo caruurta, caawinaadda dadka danyarta ah, ka-hortagga xanuunada xun-xun, bulshada oo loo abuuro fursado dhaqaale iyo isku-xirka dhalinyarada iyo dhiirri-galintooda.
“Wacyigalintaan ma ahan tii ugu horreysay ee aan ka fulinay dugsiyada sare ee gobolka Awdal, balse waa mid soo noqnoqtay, uguna talo-galaynay inaan bulshada ka wacyigalinno khatarta Tahriibka oo ah mid aad ugu soo badatay deegaannada Somaliland,” ayuu yiri guddoomiyah SECO.
Waxaa sidoo kale halkaas ka hadlaya mid ka mid ah xubnaha ugu sarreeya ururka oo lagu magacaabo Guuleed Cali Rooble oo yiri: “Runtii wa laga wada-dharagsan yahay khatarta uu tahriibku leeyahya ama isbiimeynta la isku biimeynayo dhulka shisheeye; runtii innagu waxaan u midownay inaan bulshada ka wacyigalinno kagana digno khatarta uu leeyahay Tahriibka oo aan ognahay in dadka ugu badan ee tahriibaya ay dadoodu u dhexeyso 13-sano jir illaa 20-jir waana dhallinyaro aan horay uga tarhiibin dalkooda.”
Dhibaatooyinka ay la kulmaan dhallinyaradan ayaa waxay SECO ku sheegtay inay ka mid yihiin: kufsi, xarig, afduub, xeebaha oo lagu daadiyo iyagoo aan dabaalan karin iyo xubnaha muhiimka ah ee jirkood oo lagala baxo.
Sidoo kale, wax iyagana halkaas ka hadlay maamulka dugsiydda sare ee loo sameeyay wacyi-gelinta sida dugsiga Ardaale, Faysal Maxamed Gafane oo xafladda soo gunaanaday wuxuuna sheegay in ardayga ay tahay inuu wax-barto si uu awood ugu yeesho inuu nolosha ka qabsado qaybta uga soo aadda, balse aan loo baahanyn inay tahriibaan.